Shina 250ml500ml OEM serivisy fanasan-damba fanasan-damba mpanadio sy orinasa mpanamboatra | Baiyun
250ml500ml OEM serivisy fanasana lamba fanasan-damba
Vokatra: Ranon-dronono mpitsabo mpanampy 250ml
Fampiharana: Fanasana lamba
Quatity: 15% Asa mavitrika
Hanitra: Rose, Lavender na namboarina
Loko: Manga / volomparasy / voasary mangarahara
Fonosana: Kitapo tsirairay avy amin'ny tavoahangy
Ireo miavaka voalaza etsy ambony dia azo alamina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Fonosana Kitapo tsirairay avy amin'ny kitapo, 40pcs / baoritra. Ekeo ny fonosana manokana.
(1) Ny akora rehetra dia voajanahary 100% sy sariaka ara-tontolo iainana; fanadiovana lalina ho an'ny lamba isan-karazany, savony ambany, mora kosehina, tsy misy sisa tavela, azo ampiasaina amin'ny tanana sy ny milina.
(2) Ny rafitra miasa matihanina miaraka amina andalana famokarana sivy (ao anatin'izany ny iray nampidirina avy any Italia);
(3) Ny mpiasa mahay dia miahy ny antsipiriany rehetra amin'ny fikirakirana ny famokarana sy ny famonosana; Tsy misy mpandraharaha manadio fluorescent
Mety amin'ny landihazo, akanjo rongony, lamba mifangaro, akanjo akaiky mety koa.
(4) Ny ekipan'ny QC dia hijery sy hanamarina ny kalitao in-3: mandritra sy aorian'ny famokarana, alohan'ny hamonosana sy hametrahana.
Teo aloha: 600ml Milomano fanasan-damba maloto fanasan-damba, fofona manitra, Mampiasà amin'ny detergent fanasan-damba ampiasaina amin'ny tanana sy milina
Manaraka: singa malemy azo antoka azo antoka ranon-javatra voasarimakirana voasarimakirana
Varotra varotra detergent ranon-javatra fanasan-damba vaovao ...
Détergent fanasan-dranon-drano voajanahary, ranon-javatra la ...